Indawo Yokuphola Enemibala - iholide emnandi! - I-Airbnb
Indawo Yokuphola Enemibala - iholide emnandi!
Eli gumbi lokulala liyi-1 lijikelezwe ngamahektare ayi-5 ehlathi lonxweme. Le ndawo ineepuli ezimbini zokuqubha; ipuli enendawo yokuqubha nequla lokuqubha, inkundla yentenetya, iindawo ezimbini zokoja inyama kunye ne-spa ephandle, ibe yonke le nto ikuhambo nje olufutshane ukusuka elunxwemeni lwephenyane.
Le ndawo inamagumbi okulala avulekileyo ikumgangatho wesibini. Yeyale mihla, ihonjiswe kakuhle, kwaye inazo zonke izinto ezifunekayo ukuze kuhlalwe abantu abayi-2.
Iflethi inazo zonke izinto zebhedi ibe igumbi lokulala linefeni esesilingini kunye nento eyenza kufudumale xa kunokwenzeka iphole.
Ukonwabela kwakho le ndawo inesikrini seTV esiyi-40 " kunye neintanethi nayo iyafumaneka. Indawo yokwenza iti nekofu nazo ziyafumaneka.
Indawo yokupaka ayibhatalelwa ibe kulula ukuyisebenzisa xa ukwindawo yakho.
Ukuba uyathanda ukuhamba ngebhayisekile kukho nendawo yokukhusela iibhayisekile zakho kunye neendlela ezintle eziquka umzila wemizuzu eyi-5 ukuya kwidolophu engaselwandle.
Izinto onokuzibona uze uzenze:
1. I-Dolphin kayaking Kukho iidolfini ezingaphezukwe-300 ezihlala kule ndawo kunye namathuba okubona iidolfini kuhambo lwe-kayak ziphezulu (90%) ezinamathuba okubona amafudo, iminenga (ngoJuni- ngo-Oktobha), ii-manta rays, iintaka zaselwandle kunye neentaka ezijingayo kumawaka azo.
2. Unxweme lweWinds yindlela eya kwisiqithi esidumileyo seFrazer, esicetyiswa kakhulu ngohambo losuku.
3. Ulwandle olukhethekileyo lwe-Sands rain - uhambo lweekhilomitha eziyi-6 lokubuya elunxwemeni ukusuka e-Winds Beach Resort ukuya kule ndawo idumileyo ehlabathini. Iindidi ziye zaveza imifuno emininzi kangangeesanti ezinemibala eziyi-72 ezahlukahlukeneyo eziye zaveliswa zii-ayini zeenkomo kunye needayini zemifuno. Kungenzeka ukuba isanti ibisenziwa ukususela kwiminyaka yokugqibela yomkhenkce.
4. I-Carlo Sandblow - imizuzu eyi-5 xa uqhuba ukusuka kwi-resort ukuya kwipaki yemoto kawonke-wonke uhamba ngemizuzu eyi-15. Yindawo entle yokubukela ukuphuma kwelanga okanye ukutshona kwelanga. Ukujongwa kwee-degree eziyi-360 kuyabukeka, ukuya eMpuma kulujonga kakuhle ulwandle apho umntu edla ngokubona iminenga efudukayo ukususela ngoAgasti ukuya ngo-Oktobha. Kumazantsi mpuma kukho i-Double Island Point kunye namawa esanti anemibalabala. I-Fraser kunye neInskip point ziseMntla, ngoxa i-Tin Can Bay kunye ne-Great Sandy Straits zilele eNtshona.
5. Ichibi elipholileyo - imizuzu eyi-20 xa uhamba ngemoto ukusuka kwiresort. Hamba emahlathini emvula ukuze uqubhe eLake Poona.
6. Ukukhwela ihashe elwandle - Joyina Ukukhwela ihashe elwandle ukuze wonwabele into ekhethekileyo njengoko ukhwele ihashe kwi-Patio Beach emangalisayo. Ukukhwela ihashe ngaselunxwemeni kuyamangalisa, xa ubona 'Izanti ezinemibala', 'i-Double Island Point' kunye 'neFraser Island'.
6. 4WD elunxwemeni - Kukho iivili ezine zokuqhuba ezenziwa eWinds. Unokuqhuba umzantsi ukuya eNoosa okanye kumantla ukuya eFraser. Endleleni jonga indawo yokukhempisha eFreshwater, i-Double Island Point, iiSands ezinemibalabala kwaye ubuke ubuhle bale ndawo intle.
7. Ukutyibilika emoyeni - Yonwabela ezona zinto uzonwabeleyo e-Winds Beach, i-Tandem Skydive ebukekayo ngaselunxwemeni kwi-Fraser Island, i-Carlo Sandblow, i-Double Island Point kunye neSands ezinemibala egqamileyo i-Winds Beach. Ingxangxasi ekwisantya ukuya kutsho kwi-220km/hr uze wonwabele ukubona unxweme ngaphambi kokuba ufike ngqo elunxwemeni lokusefa.
8. Ukuloba elwandle - Ulungiselelwe ngokupheleleyo iBaitrunner ngeti yasekuseni, isidlo sasemini kunye neti yasemva kwemini kunye neziselo ezithambileyo, iti nekofu ziyafumaneka simahla. Nceda uziphathele umnqwazi wakho, ii-sunnies nekhamera. Isikrini sokuzikhusela kwilanga siyafumaneka. Uvumelekile ukuba uze notywala bakho. Yonke i-bait kunye nesibambiso ziyafumaneka. Unokuzisa intonga yakho ukuba uyafuna. Isibambo sethu sineentloko eziphezulu, iBaitrunner 6500s kunye neAlveyveyveys ethembekileyo. Zonke ii-baits ezisandul 'ukuvunwa zisetyenziswa, kuquka i-yakka ephilayo nesisikiweyo
Ukuba kukho nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho, sinokuqhagamshelana nawe ngefowuni size sibe nomhlali wendawo ukuba asikwazi ukusombulula umbuzo wakho ngefowuni.